ကော်မတီမှတ်ပုံတင်ခြင်း• DutchtownSTL.org •ဒတ်ခ်ျတောင်း၊ စိန့်လူးဝစ္စ၊ MO
Dutchtown ကိုနေထိုင်ရန်ပိုကောင်းသောနေရာတစ်ခုဖြစ်စေလိုပါသလား။ ငါတို့သည်သင်တို့၏အကူအညီကိုသုံးနိုင်သည်! အောက်ပါဖောင်ပုံစံကိုဖြည့်စွက်။ သင်စိတ်ဝင်စားသောအရာကိုကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးပါ။ အစည်းအဝေးများနှင့်အခြားစေတနာ့ဝန်ထမ်းအခွင့်အလမ်းများကိုသင့်အားကျွန်ုပ်တို့အသိပေးပါမည်။ ကော်မတီများနှင့်သက်ဆိုင်သောအချက်အလက်များအတွက်အောက်သို့ဆွဲချပြီးရှာပါ ဤနေရာတွင် Dutchtown ကော်မတီများ၏ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်.
ပုံစံ စီးပွားရေးအရေးပါမှု အဖှဲ့အစညျး ရာထူးတိုးမြှင့်ပေးခြင်း မည်သည့်ကော်မတီများကိုသင်စိတ် ၀ င်စားသည်ကိုစစ်ဆေးပါ။ နောက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက်အောက်တွင်ဖတ်ပါ။
လုံခြုံစိတ်ချရသော၊ သန့်ရှင်းသော၊ အစိမ်းရောင်ကော်မတီသည်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိသက်ဆိုင်သူများနှင့်အလှဆင်ခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ လုံခြုံရေး၊ Safe၊ Clean နှင့် Green သည် Dutchtown ရှိခံစားချက်များနှင့်ဖြစ်ရပ်မှန်များတိုးတက်စေရန်မဟာဗျူဟာများပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်သည်။
အဆင်ပြေပါတယ်! ကော်မတီတခုခုမှာသင်အချက်အလက်ပိုလိုချင်နိုင်တယ်။ ဒါမှမဟုတ်အစည်းအဝေးတွေကမင်းရဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူး၊ သင်ဟာသန့်ရှင်းရေးလုပ်တာကိုစီစဉ်တာ (သို့) ဖြစ်ရပ်တွေအကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာကိုလုပ်ဖို့ပဲလိုချင်တယ်။ သင်လုပ်ချင်တာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းရဲ့အကူအညီရလို့ဝမ်းသာပါတယ်။ ငါတို့ကိုထွက်သွားပါ Dutchtown ကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ဘယ်လိုအတူတကွလုပ်ဆောင်နိုင်မလဲဆိုတာကိုလေ့လာသွားမှာပါ။
အဂၤလိပ္ (English) • စပိန် (Spanish) • TiếngViệt (Vietnamese) • አማርኛ (Amharic) • العربية (Arabic) • বাংলা (Bengali) • Bosanski (Bosnian) • 简体中文 (Chinese) • français (French) • ဗမာစာ (Burmese) • नेपाली (Nepali) • Afsoomaali (Somali)